Na AMD anyị zutere ọzọ | Site na Linux
Anyị na AMD zutere ọzọ
Mgbe m chere na enweghị m ike ịkụ ala, mgbe m rere Nvidia m hụrụ n’anya, ekpebiri m ịre Intel i5 m hụrụ n’anya, n’ihi na Linux enweghị m ike ịme egwuregwu ọ bụla ọhụụ nke ọma (ma e jiri ya tụnyere Windows).
Ya mere, azụrụ m onwe m, dị ka ọtụtụ ndị ọrụ Phoronix tụrụ aro ka azịza AMD nye m. Ogbenye m bụ onye chere na ihe agbanweela kemgbe June 2012… mana mba, ọnweghị ihe ọ bụla, ọ nweghị ihe gbanwere, ihe niile ka dị.
M na-amalite site n'ule Ubuntu 13.04 na nke m apu a8 5600k (radeon 7560d), M na-ahụ na free ọkwọ ụgbọala dị oke ngwa ngwa, na flash m nwere ike ghara itinye na ihuenyo zuru n'ihi na pc slows, na mgbe ahụ m na-agbalị iji kwalite kernel ka 3.11 (nke nwere ike njikwa ike). Jiri edorg edor inwe oghere ikpeazụ nke ndị ọkwọ ụgbọ ala amd na tebụl ikpeazụ, malitegharịa, rụọ ọrụ njikwa ike, mana ihe niile ka dị otu, onye na-ebido ngwa ngwa dị ka emule na 1999 (ọ bụrụ na e mepụtakwara ya ...), ma ka mma ka anyị ghara ikwu okwu maka ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ.
N'ịgbalị ịchọta udo, m dochie onye ọkwọ ụgbọala nweere onwe ya na nke naanị, dara ogbenye m, ọ gwara m! Kasị njọ enweghị ike ịga! O doro anya na e doziri m ahụhụ m gwara afọ gara aga, etinye m ọkwọ ụgbọ ala ma achọpụtara m na m na-akụ na mmeputakwa nke vidiyo na ọkụ, agara m AMDCC, mee ka anya mmiri ahụ ghara ịgba, m tinye ihe nkiri, ọ na-egosi dị ka jerks ... , ihe niile na-anọgide otu…
Ya mere, ana m ewere laptọọpụ m wee malite ịchọ distro ọzọ, mgbe awa 2 gachara na-eche maka distro nke m ga - eji, na - ahụghị nke mejuru m afọ, nke si na Igbe ahụ, ekpebiri m ibudata archlinux, M na-amalite echichi, m na-etinye KDE, na-eche ihe Nwa ọ dị mụrụmụrụ, m na-ejikwa ebe nchekwa VioLO iji nweta ndị mgbasa ozi kachasị ọhụrụ.
M na-anwale, ana m agbanyụ Kwin vsync ma rụọ ọrụ AMDCC (nke Kwin anaghị arụ ọrụ ọ bụla). N'ikpeazụ, m na-agbalị ịhụ ọkụ ..., nwayọ ... nwayọ nwayọ, ọbụlagodi na-eri obere cpu, ọ bụ ihe ọhụụ n'ihi na ọ gafere 20 fps fluid (ọ bụrụ na anaghị m ehie ihe nkiri a na-agbapụ na 23/24 fps), yabụ ị nwere ike ịhụ ụfọdụ jerks ọ bụla 4/5 sekọnd.
M na-agwa onwe m! Ọfọn, nke a bụ ọkụ .., ka anyị nwaa ihe dị mma karị, ana m ewere VLC, ana m egwu Anime 1080p nke akpọrọ Break Blade, ana m anwale, m hụkwara etu xv Onweghi ihe na-aga were were, o nweghi ihe gbanwere, o ya na jerks na ebe ana agba oso, dika na June 2012, mgbe m ka no na eji radeon 4650, ya mere m kpebiri inyocha mmeputa gl, M na-anwale Mplayer na VLC, mmiri niile, m na-emegharị ihe ọmụmụ ahụ gaa na nkeji oge iji lelee, na otu ahụhụ ahụ m kọọrọ na Jenụwarị 2012, ka nọ ebe ahụ .., mgbe m na-emegharị cursor na nkeji nkeji na olu , OpenGL na-arahụ ma mepụta arịa na ihuenyo niile the.
Ndidi m gwụrụ ma ugbu a, m na-ede site na Windows, na-enwe olile anya na ndi nne na nna m n’onwa Oktoba ga-enye m ego iji zutara m a Nvidia...
Biko azula AMD!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Anyị na AMD zutere ọzọ
Ihe 107 kwuru, hapụ nke gị
Ọ bụ na m na-agụ gị na ọ bụ otu ihe ahụ. Ọ bụrụ n’ịma na kaadị ndị ịzụrụ anaghị arụ ọrụ gị nke ọma na GNU / Linux, kedụ ihe kpatara ị ji ewepụ Windows? Na ọrụ m na-eji PC na Windows si mmepụta ihe na m wepụ ya. M wụnyere Debian na m nwere boot abụọ. Ọfọn, n'ihi na mgbe m chọrọ igwu egwu, m banye Windows na ọ bụ ya. Isiokwu agwụla.
Enwebeghị m Windows maka ihe dị ka afọ 2, m na-egwu egwuregwu naanị na Linux, egwuregwu egwuregwu (nke dị ezigbo mma na ndị ọzọ na-apụta) ... Ahụghị m ihe kpatara m ga-eji Windows iji mee ihe m nwere ike ime na Linux.
Ọfọn, ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ maka gị, ọ naghị arụ ọrụ maka gị.
Emela m ọkụ, Amaara m na Pandev ga-akpọ m asị maka okwu a, mana iji kwanyere ntụkwasị obi anyị nwere na ibe anyị na mmuo m imebi bọọlụ ya:
Ọ bụ n'ihi na ọ bụ oji ... XD
Kpọrọ, ọ bụ na na na ¬¬
Kpa oke agbụrụ ON! 😀
Iji kpọọ egwuregwu na-anaghị adị ndị obodo na Gnu usa
Okpu mmiri na-ezo na 3… 2… 1… AMD adịghị njọ, ọ bụghị ma ọ bụrụ na ị na-eji ya na mpụga Linux.
"Nke ahụ wepụtara ndị ọkwọ ụgbọala ya, nkọwa ya, dị mma, goodaaaa", ọ na-asọ m, ha anaghị arụ ọrụ ọfụma, ọ bụ ya mere m ji hapụ ha afọ gara aga na ọkwa eserese na m na-edebe Nvidia GT430 m, ọ bụghị anụ ọhịa mana m nwere ike igwu egwu, enwere m ike mgbe vidio, M nwere ike ime ihe m chọrọ na-enweghị na-aga site isi ike na Linux
I kwuru eziokwu @nano, ATI dị mma na Linux, n'ihi na ọ bụrụ na ị na-eji Linux ma nwee ATI ọ naghị adabara gị nke ọma, ihe ihere n'ihi na kaadị eserese ya n'ọtụtụ ọnọdụ karịrị NVIDIA (ma nke ọzọ na-eme).
Aga m edebe NVIDIA m oge na adighi anya aga m enwe Intel HD Graphics on a Core i3 😀
Etu 8 🙂
Na-eche n'ezie na ọ bụ oyi akwa 8. Enwere m obi abụọ na ya, ọtụtụ n'ezie.
Ha bụ otu ihe ahụ mere ka m daba na phoronix na n'ezie dịka apu dị na euro 80, onyinye nke amazon ahahhaa bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha xD.
Amd weputara ya ụdịdị ohh ee 8D
Nsogbu gị dị ezigbo iche, abụ m nrọ nke akwụkwọ ndetu nwere apu E450 nke m na-agba Debian ule Xfce ya na ndị ọkwọ ụgbọ ala ma anaghị m ewepụta nsogbu ọ bụla ị tụrụ, ewezuga maka ngosi nwayọ na flash na 720p, mana nke ahụ bụ ntụ ọzoo iphe. Ọ na-adabara m na ọ nwere ike ịbụ ihe KDE "ndakọrịta".
@JackassBQ nke ahụ bụ ikpe gị, mana "nsogbu" nke ngosi ngosi nwayọ nwayọ na 720p site na ndị ọkwọ ụgbọ ala ATI ị nwere, enweghị ihe kpatara ya, azịza ya dịkwa oke nfe, ebe NVIDIA na-eji ọmarịcha ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala nwere ihe. Nke ahụ anaghị eme eme na nke ahụ bụ nnukwu nsogbu nke ATI / AMD nwere ndị ọkwọ ụgbọala ya na agwa adịghị mma ha, nke n'ikpeazụ na-eme ha nhọrọ dị oke njọ nke ukwuu mgbe iji GNU / Linux jiri ha.
Ana m agwa gị na ọ bụghị dị ka ị na-ekwu, emeela m ule na intel na nvidia na ngwaike yiri nke m na nsogbu ndị dị na flash bụ otu. Onye ọ bụla maara na flash na GNU / Linux na-eme nzuzu, nke ahụ bụ nsogbu ahụ.
N'okwu m enwere m ike ịhụ flash na 720p na 1080p na ọhụụ n'enweghị nsogbu sitere na YouTube, yabụ ọ dị m ka ị na-achịkọta. Na Intel, HD Graphics dị mma na enweghị m nsogbu na ha, enwere m olileanya na enweghị m ha na pc m ọhụrụ.
Nouveau m na-ekpo oke ọkụ na kaadị… ya mere, m ga-eji ndị nwe ya eme ihe
Enyi, kọmpụta ọ bụla dị iche na nke ọzọ, ọbụlagodi na ọ bụ ihe ngosi 2 yiri nke ahụ na nkọwapụta 😉 site na ahụmịhe m na-agwa gị, ejirila m ọtụtụ afọ dozie ma lelee kọmputa, enwetala m nkwubi okwu m ma na akwa 8 a na-eji ma ejiji, enwere ụdị amd na eserese ndị dị jụụ na Linux dị ka ndị ọzọ na ị naghị amalite ma ọ bụ jigide xD, ugbu a naanị ụlọ ọrụ m hụrụ nke na-etinye ndị ọkwọ ụgbọala ha bụ ndị Intel, ọ bụ ezie na agaghị enwe ụdị nke ha chọrọ ịmalite Agha oku, ka anyị kwuo ihe dịka ha siri dị, ma amd ma nvidia enweghị ike ịhapụ koodu ntinye ha iji mejuputa ya na Linux, oghere ndị ahụ dị ole na ole na ihe na-atọ ọchị nke na oge na-aga amd na-enyefe ha ka ha bụrụ ihe nketa, ọ dịghịkwa nke ọ bụla 2 nwere ike ime ihe dị mma na aka ha, ihe ọzọ bụ ịgbanwe onye na-anya ụgbọ ala na ndị nwere ihe ịchọpụta ma nweta ọkwọ ụgbọala na-akwadoghị, mana ezigbo onye ọrụ: /
Cheers! 🙂 (Jiri Intel n'agbanyeghị na ọ masịghị gị nke ukwuu, ọ bụ naanị nhọrọ bara uru ruo mgbe ị ga-arụ ọrụ gị nke ọma ọ bụghị ọkara ...)
chucha xD bụ maka okwu @jackass xd
Kpamkpam kwenyere. Ọtụtụ kwenyere na ndị ọkwọ ụgbọala nwere ikike, n'ihi nke ahụ, ka mma, ma n'ezie na ihe niile ha na-eme bụ iwelata kọmputa ahụ. Enweghi m nsogbu na Ubuntu ochie, mgbe ha malitere ịpụta (mbipute 12) agbanwere m na LMDE ma dozie nsogbu ahụ.
Zaghachi Marcelo Tamasi
Eji m obi ike na m gbalịrị iji nvidia gt630 na intel hd4000, yana 0 nsogbu na flash, yana naanị nsogbu bụ intel bụ na nke abụọ, ọ dọka ma ọ bụ na ọ dọka, mana ọ nwere nnukwu mmiri.
Ya mere, ma eleghị anya, ọ bụ oyi akwa 8 nke m na-enweghị ike iji intel ma ọ bụ nvidia ndịna-emeputa n'ụzọ dị mma, na oyi akwa 8 n'ime gị enweghị ike iji AMD dịka o kwesịrị
Odi ihe i chere nwa nwoke xDDDD.
Ọ bụrụ na ọ na-eme gị obi ụtọ: ok
Echere m na ị na-apịa ọtụtụ na oyi akwa 8, na ikpe m nwere ike na-agwa gị ka ị na-eche ihe ị chọrọ.
Ọfọn, mgbe ha mụtara ịhazi ngwaike ha nke ọma, anyị ga-ekwu 😉
Odi mma, anyi g’eme ka imata, ikene ekele na jisie gi ike.
Nyela m ihe kpatara m ga - eji dozie nsogbu gị, otu ị ga - esi nweta ya. Banyere.
Site na i3 nke ọgbọ mbụ na Intel HD Enwekwara m nsogbu na flash, ọkachasị na ihuenyo zuru oke.
PS: Ọ dịghị mkpa ịkpa ọchị, onye ọ bụla nwere ahụmịhe nke ha na ngwaike ha yana onye ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ bụ otu ma ọ bụ ngwaike ahụ n'onwe ya.
HTML5 na ejije ahụ agwụla
Daalụ maka ndụmọdụ ahụ. Anyaụfụ ndị ruru unyi na onye ọkwọ ụgbọala ha anaghị akwụ ụgwọ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-elekọta ezigbo onye ọkwọ ụgbọala ha anya.
Ọ dabere na NVIDIA, enwere m agadi nwanyị (8400 GS) na ọ dị mma, yana obere okpomọkụ dị ihe dị ka 48ºC na 60ºC na ike zuru oke, m na-egwu ihe ma ọ bụ ndị ọzọ, n'oge na-adịghịkwa anya PuerVideo HD engine ga-enwe ike iji ya mee ihe, ọ bụ ezie na n'ezie Agaghị eji ya tụnyere ọkwọ ụgbọ ala, ihe na-efe ebe ahụ.
M nwere AMD A10-5800K APU na Radeon (tm) HD Graphics 7660D na ọ na-arụ ọrụ nke ọma… mara nke ọma ma lelee ihe na-efu .. dịka ọmụmaatụ: ị ​​nwere chanel abụọ arụ ọrụ? ego ole ka ọ nwere? wdg
ee ihe ichoro bu na Linux ga-abu ihe ziri ezi na windo mgbe ahu nsogbu a di gi n’obi ma odighi na gnulinux
Chọ ihe nke anyị tinyeworo ezigbo ego iji rụọ ọrụ ọfụma ma ọ bụ, opekata mpe, nke ọma abụghị nsogbu ọgụgụ isi, ọ bụ ezigbo ọgụgụ isi.
Zaghachi ka nop
ebule 1333 mhz ddr3, ihe niile gbara ọrụ, eji m 512 mb nke ebe nchekwa maka apu, ọ bụghị ajụjụ nhazi, ọ bụ otu akụkọ ochie ahụ, ndị ọkwọ ụgbọ ala amd dị njọ na 2d ..., ụnyaahụ m na-atụle nke ahụ nke ọma na phoronix. Ugbu a na onye 13.8 ọkwọ ụgbọala nke bịara ụnyaahụ ma ọ dịkarịa ala egwuregwu ndị ahụ adịghị njọ, ndị valvụ ahụ, mana ya na 13.7 nke m nwere ụnyaahụ, jọgburu….: /. Amakwaara m na nke a abụghị okwu ọhụụ, n'ihi na esemokwu nke mmeghe opengl na vlc na mplayer ebula ụzọ kọọ mgbe ị na-eji radeon 4650 ọ ka dị. Iji mee ka ihe ka njọ na ngwụcha izu a, m ga-eme vidiyo na-egosipụta nsogbu ahụ.
Maka ọtụtụ, dịka m na-agaghị azụta amd, ọ bụrụ na achọrọ m ego na Intel i3 abụghị naanị nwayọ nwayọ dị ka cpu, kamakwa nwee ihe eserese niile Intel HD2500 / 3000 ndị na - abaghị uru igwu egwu na windo.
maka APUs ncheta RAM dị mkpa ugboro ugboro, ọ na-eme pc ka ọ dị mma, ihe site na 1866 ma ọ bụ 2000 +
ikekwe nsogbu ahụ bụ ịbụ eserese agbakwunyere maka APU, ị nwekwara ike iji ụfọdụ FX nwere ihe ngosi mara mma HD 7000 usoro nke obere etiti
O bu otu ebulu ahu ka m ji mee intel hd4000, n'ezie oburu na i tinye oso oso, i gha achota ihe di iche, mana nke ahu bu na onye nkpali gha enwe ogha mega ndi ahu.
Ọfọn, Intel nwere nke kachasị 1600mhz maka RAM (na nhazi ahụ), na AMD ọ ruru 1866mhz ọ dị m ka, m hụkwara OC karịa 2000, mana nke ahụ bụ maka ndị APU ebe ọ bụ na ha na-agba ọsọ nke ọma inwe ọtụtụ ugboro na RAM bu ihe kpatara o jiri kwuo ya xd.
Isiokwu na-akpali. Anaghị m egwu egwuregwu, ọbụlagodi ọ bụghị ndị ọkaibe nwere nnukwu ngwaike chọrọ. Maka ihe ọ bụla m na-eji Linux na nyocha m Debian m 64 XFCE4 na obere Intel G31 / 33 dị n'ụgbọ, enwere m oke.
Aga m agbanwe mgbakwunye firefox na onye ọrụ gị ..
Na archlinux, ndị ọkwọ ụgbọ ala ATI bụ ndị kachasị njọ n'ụwa, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-eji violo, ọ kachasị mma ibudata otu ma jiri aka ya hazie ya (ọ bụrụ na ịchọrọ iji ndị nwe ya)
Eji m ATI HD3000 eme ihe, ndị ọkwọ ụgbọala nweere onwe ha kachasị mma maka ihe nketa a, mana ị ga-ahazi ya iji nweta ọtụtụ uru, ana m akwado ka ị gụọ archlinux radeon wiki https://wiki.archlinux.org/index.php/Radeon#Performance_tuning
Chetakwa na Archlinux anaghị abịa ihe ọ bụla na ndabara, ọbụnadị ọbá akwụkwọ ọsịse eserese niile:
lib32-fontconfig lib32-libxcursor lib32-libxrandr lib32-libxdamage lib32-libxi lib32-gettext lib32-glu lib32-libsm libxi gettext glu libsm desktop-file-utils lib32-giflib libpng lib32-libpng gnutls lib32-gnutls libxinerama libxcomite -libxcomposite libxmu lib32-libxmu libxxf32vm lib32-libxxf86vm libxml32 lib86-libxml2 libldap lib32-libldap lcms lib2-lcms mpg32l ib32-mpg123 openal lib32-openal v123l-utils lib32-v4l-liblsa tebụl lib32-okpokoro
Na n'otu ụzọ ahụ wụnye ọba akwụkwọ niile edepụtara ebe a https://wiki.archlinux.org/index.php/Steam/Game-specific_troubleshooting#Dependencies
Maka ihe nketa! The free ọkwọ ụgbọala bụ ndị kasị mma ebe ọ bụ na ha na-egbu maramara, ma site na 5xxx usoro n'ihu, ha na-adịghị kpamkpam egbu maramara ma mhhh ...
Enyochawo m ya ọtụtụ oge na anụ m ... AMD dị mma maka ọnụahịa, mana na arụmọrụ (yana ọtụtụ na Linux) ọ naghị akwụ ụgwọ, site n'ọtụtụ. Dịka m kwuru na ọkwa m gara aga, ọ bụkwaghị nsogbu nke arụmọrụ na egwuregwu (nke a na-emeziwanye), mana nsogbu na desktọọpụ n'ozuzu.
Enwetara m Nvidia 9800GT ụbọchị ole na ole gara aga, ihe dị iche na arụmọrụ na-ahụkarị, ma ọ dịkarịa ala na ndị ọkwọ ụgbọ ala. Enwere ike ịnweta kaadị a maka ezigbo ọnụ ahịa nke abụọ, na-atụle ọrụ ọ na-enye. Ebidoro m njikọ site na Phoronix ụbọchị nke ọzọ yana akara ngosi Linux / windo mara mma maka Nvidias site na 98'00GTX gbagoo.
Maka ndekọ ahụ, Catalyst for Linux ka mma nke ukwuu. Afọ ole na ole gara aga, iji HD4330 laptọọpụ m na OpenSuse / Kde na Ubuntu bụ chi ... na Debian ọ ka mma.
Ha emeela nke ọma n'ọtụtụ ihe gbasara nsonye 11.xx mana n'ihe gbasara 12.6 nke bụ nke ikpeazụ na-akwado radeon 4650 .., nke ọma, mba ... ha mere m mgbe m kọọrọ chinchi ahụ! Ekwenyere m na opekempe nke ụlọ ọrụ dịka amd kwesịrị ime bụ ime ka ndị ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ nke ọma na kwin ma ọ bụ compiz, na xv anaghị aga ọkara ọkara nwayọ ma e jiri ya tụnyere nvidia ma ọ bụ intel.
Echere m na nsogbu ahụ doro ndị ọrụ anya na afọ ole na ole gara aga, mana ugbu a egwuregwu ndị nwere ike ịkpa ike abịarutela, ihe anyị niile maara amalite ịpụta: na ndị ọkwọ ụgbọala nke Linux bụ 'shit'. Echere m na n'ime afọ ole na ole, nke a ga - aka mma ... na ma ATI ma Nvidia. Mana maka oge a, ndị nke anyị nwere “ochie” eserese doro anya banyere ya. 😀
Naanị ụnyaahụ enwere m ahụmahụ dị otú ahụ na HD5670 m, nke na-arụ ọrụ nke ọma na Windows. Mgbe m gbanwere draịvụ ike m masịrị m ịwụnye ihe niile site na ncha, na ụnyaahụ ọ bụ Linux Mint 15 Cinnamon.
- Dị nnọọ arụnyere na ọ na-enye m free ọkwọ ụgbọala, na ụfọdụ nsogbu n'ụzọ ziri ezi ịchọpụta mkpebi ma m dozie ya ngwa ngwa.
- M wụnye 'fglrx' na mgbe ibidogharịa Cinnamon peta ọ na-abanye n'ihe nketa mode ma ọ bụ ihe ọ bụla a na-akpọ ya.
- Awụnyere m 'fglrx-mmelite', nke na-adịbeghị anya, na ọtụtụ otu (ahịrịokwu a mara m nke ọma).
Ahapụrụ m ndị ọkwọ ụgbọala ahụ n'efu, nke na-adịghị ka ọ ga-ezighi ezi ruo mgbe m wụnye ọtụtụ egwuregwu. Naanị m nwara lincity-ng na-enweghị ihe fọrọ nke nta ka m na-agagharị na menu ya m ga-esi na desktọọpụ.
Echi m ga-aga n'ihu ịnwale.
N'ụzọ dị ịtụnanya, na laptọọpụ a na HD7470 ọ na-aga nke ọma na 'fglrx-updates' (ọ bụ ezie na echere m na m na-echeta ihe na vidiyo ihuenyo zuru oke), mana ebe a ka m na-eji Mate, nke na-achọghị ka ahịhịa Cinnamon na desktọọpụ ndị ọzọ nwere ntọala nke oge a.
nwalela oke osimiri apu a8 5600k?
adala mba ...
Site na asrock board, m gbanyere Xboost, yabụ achọpụtara m xD bụ oceada ..., ugbu a, m ga-anwale ubuntu 13.10 iso wee jiri distro na-eji ụfọdụ gburugburu na-enweghị mmetụta, dị ka crunchbang, rue okpu uhie XD
Lee anya! AMD n'onwe ha dọrọ aka na ntị na ha na-akwado Ubuntu 12.04 naanị ... ọ bụ ezie na m ka na-agbagharị ma na-ezo aka na Catalyst Legacy, nke bụ nke m nwere maka HD4330.
Ugbu a ana m eji kubutu 13.10 anwale wee yie ka ọ zuru oke, ma flash anaghị adọka ma ọ dị mmiri ka mplayer nwere ike iji opengl n'ụzọ ziri ezi na enweghị nsogbu, dịka na 2d ihe niile ziri ezi .., ugbu a ihe m na-eche bụ ọnọdụ okpomọkụ .., lm- Sensọ anaghị agwa m ogo ole m nwere.
Ruo mgbe ị mere ya. Nke ahụ bụ mkpa ọ dị ịgwụcha ụzọ niile tupu ọ gbaa maka na ee. Ekele m, anam ekele gị 😉
Enweela m ọkara, ebe ọ bụ na elekere 1 ma ọ bụ abụọ ọ bụla, dị ka gpu mkpọka na ihuenyo ahụ na-agbanyụ maka sekọnd 2 wee gbanyekwa ya ọzọ.
Enwere distros na-akpa agwa dị ka nsị (anaghị m ekwu na ọ bụ, nke ọma, n'ezie ee, naanị debian na emepeuse na mint na-akpa agwa dịka m chọrọ: P)
Biko melite edemede gị / iwe
Kọmputa m dị njọ karịa nke gị
AMD X3 450 + ATI HD 4250 na 720p na ASUS ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 24 ″ 1080p
Na Manjaro na ndị ọkwọ ụgbọala bụ n'efu ihe niile na - arụ ọrụ - belụsọ Blender nke m na - anaghị eji kemgbe ATI na - eji OPENcl - mepee - ma ọ bụghị CUDA - emechi -
Achọghị m karịa na ụbọchị ya ogo / ọnụego kacha mma
APU adighi eme ihe ebube, obu inwe obere nzoputa
Ọ na-ewute m gbahapụ nke ndị na-achịkwa nke na-eme ụdị niile
Na GPUs nke ATI - NVIDIA a na - akwụ ụgwọ dị mma yana ndị njikwa na CUDA nwere uru karịa ụdị Nvidia nke ọnụahịa na arụmọrụ yiri nke ATI, mana na APU, a ga - eji Intel tụnyere ọnụahịa na arụmọrụ yana ọnụahịa. maka CPU ga-enweta ATI, yana na ọnụahịa na arụmọrụ maka GPU.
Tinye ihe ozo di iche iche nke Intel na ihe osise Intel maka otu onu ahia, ma obughi ihe nvidia Intel + nke jikọtara ọnụ na adighi.
Laptọọpụ m na ndị ọkwọ ụgbọala nweere onwe ha na radeon 4650, ọ ruru ogo 90, n'ihi ya, anaghị m ezube imelite ihe ọ bụla. N'ọnọdụ ọ bụla m ga-egosi ụdị njakịrị ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị m nọ na ya. Ma na ikekwe echi.
Compa achọrọ m ka ọchichọ ya niile kwe omume, ana m eche na ọ nwere amoosu / nkọcha na ya ha -Na-egwu egwu.
Anọ m na amd apu A8-3850 ruo nwa oge ugbu a, ma dịka gị ọnụahịa ahụ jidere anya m kpamkpam. Agbalịrị m ọtụtụ distros ma gbanwee, mana ọ bụghị n'ihi nkwụsi ike, kama ọ bụ n'ihi m, ma nsogbu ndị ahụ enweghị nsogbu anaghị eme m, mana arụmọrụ ahụ abụghị otu na Windows gburugburu egwuregwu, ndị na-agba mmanya na-adị njọ . E wezụga na, m Chakra bụ karịa mụ na free ọkwọ ụgbọala; Naanị m na-ekwusi ike na ọkụ na Firefox bụ ihe jọgburu onwe ya na na Chromium ọ bụghị otu, ọ dị okomoko.
Enwere m dualboot ugbu a, na windo maka egwuregwu. Mana amam na ndị ọkwọ ụgbọ ala amd nọ ogologo ụzọ si na ọkwa nvidia.
Apu gị tọrọ m, ọ na-eji hd65xxd nke bụ nha nhata usoro 5xxx ya mere o nwere nkwado ka mma :). My 2d nsogbu na-na kubutu 13.10… ka m mee a ole na ole ọzọ ule.
NA CHAKRA Ihe niile zuru oke
Ọ bụ ya mere ị ji eji windo (kachasị trolling).
Ọ dị mfe (maka m) Adịghị m onye egwuregwu, ọ bụrụ na m na-egwu egwu m na-eme ya na ndị na-abịa na ndabara na usoro (ọ bụrụ na ọ na-abịa na ya), ọ dịghị ihe dị ka itinye oge na-egwu Sudoku ma ọ bụ Mahjong (nke ikpeazụ m zutere / mụta Ekele nke batara na Ubuntu) ka imelite usoro ma obu budata ihe.
Ma ọ bụrụ na m na-egwuri egwu, ana m eme ya na egwu 2, ọ dịghị ihe dịka ezigbo nsogbu PES na enyi, yana obere mmanya biya, ọ bụ ezie na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na m na-efu.
PS2 enweghị egwuregwu kachasị mma n'ụwa: Serious Sam xDDD
Na Linux na egwuregwu ahụ bụ hyper mega emezighituri kachasị, ọ bụ ihe ihere: /
Anọ m na-eji ati afọ 10 ugbu a enwere m atu 5670hd na debian na ndị ọkwọ ụgbọ ala enweghị m nsogbu na flash ma ọ bụ vidiyo, igwu egwu ebe ahụ ma ọ bụrụ na m jiri windo, belụsọ mgbe m na-egwu FTL nke m hụrụ n'anya. na mpempe, onye ọ bụla na-ekwu banyere otú ha na-eme na ngosi.
dika m kwuru tupu akụrụngwa AMD RADEON dị mma karịa Nvidia mana NVIDIA nwere sọftụwia ka mma karịa AMD. Abụ m onye ofufe nke AMD mana ruo mgbe ihe dị mma si na draịva na Linux m ga-aga n'ihu na-eji Nvidia na ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma na GNU / LINUX
Amaara m na abụghị m naanị onye ọrụ nwere obi ụtọ na AMD. Anaghị m eme ihe, anaghị m egwu, mana m na-eji shei gnome, (ọ na-agwụ m ike), ana m ele vidiyo vidiyo, ihe nkiri (ọ bụghị karịa 720p) ha niile nwere ọkwọ ụgbọala n'efu.
Naanị m ga-asị: Ogologo ndụ AMD
Enweghị m nsogbu ọ bụla na nke onye ahụ, ihe nrụpụta repo na-aga nke ọma, naanị ihe m na-atụ uche bụ inwe ike ịhọrọ oke osooso, apu na onye raara onwe ya nye, ihe na-ezuru obere batrị, mana ọ bụghị nke ukwuu, na mmeri 8 enweghị ike ma either
Omume? Ejila ngwaahịa AMD maka mpaghara ihe ngosi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ GNU / Linux, oge
N'ezie ọ bụghị, ị mehiere, enwere m ihe ngosi AMD na vidiyo, ejiri m chakra na ihe niile zuru oke ... Na Ubuntu ọ jọgburu onwe ya.
Enweghị ihe kpatara m ji PC PC 100% Intel m.
Nsogbu dị na intel bụ na ị nweghị ike igwu egwu nke ọma ihe ọ bụla ... ka anyị lee ma ọ bụrụ na ha enye mmelite na tebụl n'ihi na ọ bụ ihe ihere na ọbụlagodi dota erughị 20 fps ...
Gbanyụọ Isiokwu: Avatar ahụ na-echetara m onye nkụzi na-agba ume site na usoro ihe nkiri Daria.
Damn, echetụbeghị m na ndakọrịta (ma ọ bụ ndakọrịta!) Na AMD bụ ụdị odyssey
@ pandev92 Ebee ka fanboyism nọ?
Nwanna o doro anya na ị na-eji apu apus agwakọta eserese na cpu apu adịghị njọ ma, hell anyị niile maara na ndị AMD Linux ọkwọ ụgbọala bụ ndị na-adịghị mma, ma na-akwụghị ụgwọ ma nwekwaa ya.
Akụrụngwa m AMD Phenom II X4 965BE 3.4GHZ
Ngwa igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke nwere ọla kọpa 2
O doro anya na ọ fọrọ nke nta ka m nwee obi ike ịkwado na pc gị na ọgbọ Intel mbụ i3 nwere usoro na-adịghị elu karịa 2GHz
Lee Bechmark a http://cpuboss.com/cpus/AMD-Phenom-II-X4-965-vs-AMD-A8-5600K
Kedu ka ị ga - esi hụ na cp m eri na 5600k, emela ka ị nwere nnukwu ihe na apu ahụ, ekwenyere m gị na amd anaghị arụ ọrụ nke ọma na Linux opekata mpe na Ubuntu na NO nkwekọrịta.
Ọ na-enyo na m nwere ube os 7, M arụnyere na proprietary ọkwọ ụgbọala na-atụ aro site Canonical na ngwanrọ sọftụwia na naanị ihe m nwetara bụ imebi ngwungwu ndị ahụ, ekwesịrị m ịtinyeghachi ya.
Na mbụ m jiri Chakra na ndị ọkwọ ụgbọala na ha wụnye ya na nwụnye na ndị ọkwọ ụgbọ ala, ihe niile zuru oke na-enweghị nsogbu ma eleghị anya amd agbaghị ọtụtụ fps mana m achọghị ịma fps.
Adịghị m nwa amaala AMD naanị m na-eji ya n'ihi na m na-enwe mmasị na egwuregwu ha dị mma, ị maara na Nvidia bụ AMD mana onye isi oche Jen-Hsun Huang ga-ere nvidia ma ọ bụrụ na ọ gara n'ihu na amd dị ka CEO nke ika ya, nke intel ma ọ bụ na-ekwu okwu na windo bụ ihe mkpofu.
Anabatara m, kweta ma nye okwukwe na CPU Intel bụ eze ndị eze ọ bụ ezie na AMD nwere 8 isi ala na 4.0ghz ngwaahịa ebe ha na-eji 32nm intel ga-emeri.
Eziokwu ọzọ: Dell, HP, Toshiba na ndị nrụpụta ndị ọzọ na-anata ego n’ego iji zụrụ obere ma ọ bụ ihe ọ bụla na AMD, yabụ ụlọ ọrụ ahụ gbara akwụkwọ megide ngwa ngwa elektrọnik.
Echere m na isi gị dị ọkụ, mana m chere na ọ bụ Stallman. Oge obula m kwenyesiri ike na RMS bi na 1990 ma obughi na 2013, ihe nile di ka ihe ojoo,
"Azụkwala ATI, ọ bụ onye iro nke nnwere onwe gị." Onye iro nke bọọlụ m, ikekwe ọ nweghị mmasị n'ihe ọ bụla n'ihi ya, enwere nnwere onwe, mana n'ihi ya ọ bụkwa na na Linux enwere ọtụtụ ndị Fans, ịsị na ha anaghị azụ AMD, ga-adị ka ịsị na Ubuntu dị mkpụmkpụ, naanị n'ihi na, Enweghị m mmasị n'echiche nzuzu Canonical nke ime ka a mara gị site na ịgafe ọdịmma nke obodo ma bụrụ onye nwe ụlọ.
Anaghị m emeso gị ihe ọjọọ mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịkatọ m ma ọ bụ na-eme ya, mee ya, ị nwere ikike ikwupụta echiche gị, a na m akpọ gị oku ka ị nyochaa tupu ede ihe ndị na-abụghị eziokwu.
N'akụkụ ụfọdụ, ọ bụ eziokwu, ebe ọ bụ na PRISM, ha echegharịala ma kwenye na RMS. Banyere ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ, echere m na ọ bụ maka ikike ịhapụ obodo iji dozie nsogbu na ịghara inwe mmetụta ahụ dị ka ịbụ onye onye na-akwụ ụgwọ.
Na RMS ziri ezi, ọ bụ, mana n'ọtụtụ oge, ọ na-abụkarị ihe mgbagwoju anya n'ihe gbasara okwu ya.
M na-eji Debian ka m ghara iji usoro ngwugwu ezighi ezi nke Ubuntu mee ihe (site na Ubuntu, ekwuru m, ọ bụghị site na mgbakwunye ya dị ka Kubuntu ma ọ bụ Xubuntu, nke dị mma), na m na-eji Flash Player ele vidiyo m, Skype ka m nwee ike ịme video chats na Opera ka mekọrịta m ama ọkacha mmasị.
N'ezie Ubuntu na-eme m ihere wee kpuchie m, ọ na-emebi emebi, ọ na-adị mfe karịa windo 98 ma ọ na-ehichapụ naanị maka nke ahụ.M na-ekwu ma na-ekwusi ike na DEB ndị kwesịrị ya bụ Debian na mint ...
Echere m na iji ihe ndị dị ka uzuoku ma ọ bụ codecs anaghị arara nnwere onwe anya dị ka amaghị m ma ọ bụrụ na m nwere ike iji flash na trisquel agbanwebeghị m mana maka m ihe kachasị mma bụ Chakra, manjaro na Opensuse,
Dika ndi ozo nke ubuntu ekwuru m na O dighi uru
Kubuntu na Mint bụ otu ihe na iche na Mint na-elekwasị anya na ndị ọrụ mgbasa ozi nwere mgbakwunye dị ka vlc gimp na minitube na mint nke aka ha dịka mint ndabere, mint wụnye mint, sourses wdg.
N'ihi ya, ọtụtụ nkwekọrịta nke Ubuntu nwere nzụlite dị iche iche, ihe ntanetị na mmemme dị iche iche site na nke dị n'ọtụtụ distros na-eji otu mmemme….
Ọ bụrụ na ewepụghị ubuntu na ụtọ ya, ọ ga-aka adịrị ya mfe ịnye DVD nke gụnyere Unity, gnome Xfce, LXDE na kde mana nbanye nke mir ọ bịara ịghasa njikọ dị n'etiti ụtọ ya.
Otu ihe a na mint na enye dvd na KDE, CINNAMON, nwunye na Xfce
na mint debian na cinnamon na nwunye, dịka Opensuse na-eme, nke a ga-akwado ọrụ maka ndị mmemme na ndị ọrụ ọhụụ, si otú a na-ezere ọgba aghara ma na-eche na ịdị n'otu ubuntu na ubuntu gnone bụ otu, ha na-ewetakwa otu ngwanrọ ahụ na ọdịiche nke eserese eserese.
Ọ dị mma ọzọ iji rụọ ọrụ Gnome na XCFE ka ọ bụrụ na ịchọrọ iji XFCE ị nwere ike ịgbanwe ya site na ịpị ma ọ bụ jikọta menu ya na ngwaọrụ ya, n'ihe banyere LXDE na Razor QT ọ bụ njikọta nke koodu ahaziri ahazi site na ncha.
Nke a ga - eme ka nsogbu na - enwe obere nkewa ma ọ bụ jikọta ọnụ
Pear OS + ELEMENTARY OS NA DIPEEN LINUX na mmadụ atọ a lekwasịrị anya na-eitatingomi mac os na 3 niile nwere sọftụwia nke aka ha nke gnome mana ube os na dipeen jiri gnome ka ntọala. Ugbu a site na Elementary Amaghị m ma ọ na-ejikwa gnome dịka ntọala.
Banyere RMS, ihe ọ masịrị ya na echiche ya nke ịnwe oke nnwere onwe na-egbochi ịnye ụzọ ọzọ dị mma nke nwere ike ịbụ n'efu ma nwee ogo.
Dika m mara Gnome bu ego site na redhat ma nwee gnome ntọala, n'onwe ya odi m ka gnome ka akuku nke GNU, mana ka ha na mpi ugbua ui ma obu Aqua maka mac ha kwesiri iwepu ngwanrọ ochie ma melite oru nke ihe omume a dika ihe ngosi. KDE dị m mma n'anya ọbụlagodi na a na-eri ya na ọnọdụ ui na mac na gnome dị kilomita na azụ na arụmọrụ na KDE.
Are bụ ndị na-ezighi ezi, i3 na-eri cpu ike na amd, obere ihe ọ bụla ọzọ, mana na eserese, ọ dị ezigbo anya, m na-agba gị aka igwu agha 3 na 1080p na i3 na-enweghị ihe osise ndị ọzọ raara onwe ya nye, kama na apu ma oburu na i puru ime ya. (just watch gameplays on youtube).
Site n'ụzọ, m ga-achọ ịkọwa na apu na-efu 50 euro na-erughị ihe ngosi gị ... ma ọ na-efu obere ..., Anaghị m ahụ uru a dị egwu! ebe ọ bụ na ị ga-azụrịrị ihe ngosi a raara onwe ya nye, ị na-akwụkwu ụgwọ, na njedebe ị ga-azụrịrị ihe ngosi ahụ, ma ọ dịkarịa ala ị zụrụ otu maka euro 70…, ị ga-enwe otu fps ahụ na apu.
Ọfọn na ị dịchaghị mkpa a raara onwe ya nye ndịna ma ọ bụrụ na i nwere ike na-agba ọsọ a egwuregwu na a 4250 ma ọ bụ elu ike chipset na 1024mb ma ọ bụ karịa.
Ikekwe dịka m na-ekwu na ọ bụghị njehie eserese mana ọ bụ ma Amd na Nvidia dị nzuzu. Naanị ihe dị mma na Linux bụ Intel.
Banyere ihe ị kwuru, apu dị mma karịa intel hd ọ bụla, ikekwe nke a tụrụ bụ intel HD 5000
Jiri ndị ọkwọ ụgbọ ala Linux n'efu, ndị nwe ya si ma nvidia na amd bụ ihe nzuzu belụsọ Opensuse na Chakra….
N'ụzọ na-akpali mmasị, na Ubuntu, ndị ọkwọ ụgbọala ATI / AMD na-arụ ọrụ nke ọma, mana anwalebeghị m ya na egwuregwu.
Ihe 13.15 na 13.20 dị ka ọ bụghị, site na ihe m na-agụ, ọkachasị na apus ha na-akpata ọtụtụ lags na egwuregwu na ebe nchekwa! xD
Ọ ka mma iji ndị nweere onwe ha, n'aka ekpe 4 nwụrụ anwụ 2 na usoro niile na ụfọdụ ụkpụrụ dị elu, echere m na enwere m anụ ụlọ 30 fps (1600 x900).
Ọma m na-eme magburu onwe ya na AMD, kubutu 12.10 na proprietary ọkwọ ụgbọ ala, m na-ekiri ihe nkiri, m na-egwu na uzuoku (Counter-iku iyi, na ọkara ndụ 2 deathmatch) na ihe niile dị mma.
My cpu: AMD Phenom II x6 1055t
pu: Radeon HD 7770
O yiri ka ọ bụ naanị ndị nke 7xxx XD usoro ga-bin, na kubuntu nwe ọkwọ ụgbọala ma ọ bụrụ na m na-eji openg dị ka vlc mmepụta ọ na-enye m ọtụtụ nsogbu, ọ na-akọ site na ihe karịrị otu onye ọrụ na phoronix.
N'ikpeazụ m na-eme nke ọma na kubuntu 13.10 na onye ọkwọ ụgbọala nweere onwe ya na tebụl ikpeazụ ..., enwere m ihe ịga nke ọma na ọkụ na vidiyo kacha njọ enweghị m ike ịgbalite uvd ..., m kwesịrị ịma otu esi achịkọta okpokoro ma mepụta ụgwọ pụrụ iche na vdpau arụ ọrụ.
Enweghị m nsogbu, m na-eji amd ọ arụ ọrụ nke ukwuu, n'ezie ọ ga-abụrịrị ndị apu ma ọ bụ na ha batara n'otu cpu nke ga-ewe oge, ọ bụrụ na anyị dị ka nke a, enwere ọtụtụ ihe anaghị arụ ọrụ.
Enwere m ike igwu ọkara ndụ 2 na-enweghị nsogbu, trine, bastion ma ọ bụ egwuregwu ndị ọzọ. Onwe ya, flash ahụ diri m mma ma ọ bụ 720 ma ọ bụ 1080p.
gp radeon hd 7770
8GB nke ebule.
Ọma m na-eji manjaro.
16 GB nke Ram
Na m na-egwu dota 2, ebe e wusiri ike, cs 1.6 uzuoku ma ọ dị m mma, enwere m ndị ọkwọ ụgbọala n'efu na enweghị m nsogbu na ha, Ahụbeghị m mmejọ na ngwa ọkpụkpọ ọkụ m ma m na-ele ihe nkiri na blue.ray na-enweghị jumps.
i nweghi abuo chanel rụọ ọrụ. iji rụọ ọrụ ya ị chọrọ 2 ebule modul nke na ọ dịghị ihe ọzọ 1866 na ị rụọ ọrụ ya na bios. na ihe dị iche bụ na ọ na-enwekwu arụmọrụ karịa 50%
otu n’ime ike nke apu amd a bụ chanel abuo. site na otu modul ọ naghị arụ ọrụ
ịgbalite Xboost ezughị, ị ga-enwerịrị oke osimiri ...
Ọ ga-adị jụụ nkuzi banyere otu esi akụ n'oké osimiri amd apu ... onye ọ bụla maara?
Pandev na-anọ na windo, n'ihi na ọ bụ ihe ijuanya na ọ nweghị ọrụ ọ bụla na-arụrụ gị, ma na Linux ma na OSx. (ewerela ya n'ụzọ ọjọọ eh, nke ahụ bụ egwuregwu)
: Ọ D. MMA
O yikarịrị ka Pandev ekwekọghị na UNIX na nkwekọrịta ya.
Naanị m na-ekwekọghị na garca eliotime3000 drivers, a na m achọsi ike: =) na nwute na naanị otu na-emezu ihe m chọrọ bụ nvidia.
Ekwesịrị m ịsị na ọ dịkarịa ala maka m, ana m eme nke ọma na ndị ọkwọ ụgbọ ala, ana m eji:
USlọ ASUS (P8B75-M)
Intel (R) Core (TM) i5-3330 CPU @ 3.00GHz (4 cores)
Kaadị vidiyo 1GB PCIE XFX RADEON HD 5640
Ọ dịkwa m mma, ọ masịrị m n'ezie igwu egwu na dolphin na pcsx2 na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu niile, ma na wii, gamecube na-agba ọsọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100%, naanị ndị na-egwu egwu2 nwere oge siri ike, ma ọ bụghị na ịdị n'otu na-agba oke, ọ bụ ezie na ọ naghị M na-eji ọtụtụ ihe ebe ọ bụ na m na-ahọrọ ụdị oge ochie na ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ naghị arụ ọrụ dị ka na windo n'oge ọ na-egbo mkpa m, dị ka nkọwa ikpeazụ m na-eji ubuntu 13.04 ma ọ bụghị na m bụ onye na-anụ ọkụ n'obi nke ubuntu ma ọ dịbeghị mgbe ubuntu mebiri m dịka Linux mint, mana onye obula bu onye obula, Ekele m
Na egwuregwu uzuoku? hapụrụ 4 nwụrụ2, akwa njọ sam bfe3? dota 2? wdg wdg
Ọfọn, nke bụ eziokwu bụ na enyebeghị m onwe m n'ọrụ nke ịwụnye ha site na uzuoku n'ihi na enwere m oke nbudata na ọtụtụ egwuregwu ị na-ekwu na-ebu ihe karịrị 5 gigs, ọ ga-ewe ogologo oge ibudata tf2 dịka ọmụmaatụ, mgbe ahụ ruo mgbe m nwetara akara ka mma m gafere , Cheers
Mee otu enyemaka onwe, ATI, oburu na ha abughi AMD / ATI, ka ha zuta AMD / ATI amaghi m ma ha bu ndi masochist ma obu gini.
Dị nnọọ mfe n'ihi na mgbe ị gara igwu egwu na windo ma jiri gị na nvidia nke otu ọnụahịa tụnyere .., Nvidia na-efunahụ mgbe niile
Kedu ihe dị ịtụnanya, m na cinnamon na C-50 APU na-agba LMDE ọsọ ma anaghị m ekwupụta nsogbu na ọkụ dị ka ekwuru n'elu. Aghọtaghị m ihe ọ ga-eme ndị mmadụ. u_u
Zaghachi ka gekko
Ebe obu na m azutara obere nkpara nwere amd e-300 sọrọ ya na 1.1ghz enwere m ndakpọ olileanya na amd. Laptọọpụ dị ezigbo mma, keyboard, ihuenyo, agba, wdg ... agbanyeghị, onye nhazi ahụ adịghị nwayọ ma ọ dị oke ọkụ ọbụlagodi na windo ... na Ubuntu ọ fumed (ọ bụghị n'ụzọ doro anya). Ugbu a, mụ na ọgbọ mbụ Intel Intel (3m) na ubuntu 380 na-eme nke ọma na Unity.
Kwaa m ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ya ...
The Catalyst si Xorg-Edgers rụụrụ m ọrụ na HP Envy M6 (APU A10-4600M), ọ bụ ezie na m na-agwa gị na ọ bụrụ na ọ bụ ezigbo ọka ha na ọdụ iji mee ka ọ bụrụ ihe ọchị, ọkachasị na ndị Catalysts nke Kubuntu wetara "na ndabara" 12.10 Ha anaghị arụ ọrụ na XORG 1.13 PUÑETERO !!! Mgbe abalị mụrụ nwa, enwere m ike igwu site na Wine… (Enwebeghị m ịnwale L4D2 na Kerbal Space Programme na nwa afọ). Ka o sina dị, anaghị m eji Linux arụ ọrụ n'apata a, n'ihi remix m tinyere (Ubuntu 12.10 na 13.04 na KDE na Unity ... ha anaghị adaba na m dị umengwụ iji gbanwee ihe niile ahụ)
Ugbu a ka m na-ezube ime Winbugs 8 gafere m «Velikaya Slava» (dị ka a na-akpọ ikpere m), ka anyị hụ ka o si aga ... Knowingmara na Kubuntu 12.04.3 fọrọ nke nta ka ahapụ ya (na AMD na-akwado 12.04.2 na 13.04) , nke m ji n'aka na m ga-anọ oge), ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ iji tụnyere arụmọrụ dị n'etiti nke ahụ na Fedora 19 na Catalyst 13.8 ... Olileanya ha mejuputara ma enwetaghị m "ihuenyo ahụ mebiri (et) a na ọnwụ."
N'aka nke ọzọ: Ọkwọ ụgbọala n'efu + APU = tinye testicles na steamer. Enwere m olileanya na ha nwere ike imeziwanye akụkụ ndị ahụ n'oge na-adịghị anya, n'ihi na m hụrụ AMD n'anya nke ukwuu maka ọnụahịa / uru ya.
Nsogbu ị nwere bụ Ubuntu, ọ bụghị micro, ndị ọkwọ ụgbọala, ma ọ bụ kaadị eserese. Enwere m igwe ochie, nke nwere AMD Sempron 3400 +, 2 GB nke RAM, yana nyocha 21 ′ LCD nke m nwere ike ịlele ihe nkiri, televishọn, vidiyo ọ bụla, ọbụlagodi ihuenyo zuru oke.
Kaadị eserese ahụ bụ Nvidia Geoforce (256K) dị n'ọgba, na anaghị m eji ya na ndị ọkwọ ụgbọ ala mana yana ndị nweere onwe ha na-abịa na sistemụ (Nouveau).
Usoro ahụ bụ Linux Mint Debian Edition (LMDE), nke na-abịa na kernel 3.2.0.4.
Na nke na-aga n'ụzọ zuru oke. Amaghị m egwuregwu, n'ihi na anaghị m eji; ma na vidiyo, nsogbu adịghị. Olileanya na nke a nwere ike inyere gị aka. Banyere.
Nsogbu bu ... na ha adighi ekwu okwu banyere ihe nhazi ... obu banyere APU. Enwere m Athlon 64 na Phenom X4 ndị na-agba linux dị ka silk ... nsogbu bụ ma ọ bụrụ na ị nwere kaadị vidiyo AMD. Enweela m ike ịgba ọsọ egwuregwu dị ka CoD-MWX (nke nwere X n'etiti 1 na 2), Mbibi nke 3, nke kacha mma Mkpa maka Speed ​​saga ma ugbu a, m wụnye Kerbal na L4D2 na-enweghị ọgụ (site na ndị ọkwọ ụgbọala) na «Velikaya Slava» (my HP Envy M6 APU AMD A10-4600M). Ma iji pụọ na "Velikaya Slava" (Nnukwu ebube na Russian), m ga-amụ China na nche anwụ !!!
Enweela m nsogbu yiri nke a na nke kachasị mma m nweta bụ na usoro RPM, Deb jerks mgbe ị na-egwu vidiyo na RPM kwa, mana nsogbu ahụ pere mpe mana enwere m ike ibi na nke ahụ, nhọrọ ọzọ bụ buut abụọ na sistemụ ahụ. The windo, m na-adabere kwupụta PCLinux na na siri ike kọmputa na PCLinux FullMonty N'ezie e nwere ọtụtụ ndị ọzọ e ị nwere Fedora, Opensuse, wdg Nsogbu abụghị naanị AMD, nsogbu pụtara na nke mbụ ya na kọmputa ochie Intel. na video agwakọtara ihe dị ka afọ 4 gara aga ma nwalee ihe dị ka sistemụ 10 site ubuntu…. ọbụna crunchbang na nwa nkita, ọ dịbeghị mgbe m nwara usoro BSD, ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ahụmịhe na BSD + AMD biko kwuo okwu ...
Kwụsị iji linux .... ịchọrọ ịmegharị ndụ gị.
Ewezuga ihe ị na-ekwu, nke m na-agọnahụghị eziokwu, ị chọrọ ngwa ngwa ịlaghachi ụlọ akwụkwọ elementrị iji mụọ Spanish ị na-amụtaghị mgbe ị kwesịrị inwe, eh, nwata? Lee ọtụtụ okwu na kicks na akwụkwọ ọkọwa okwu na obere ahịrị! Nwa nwoke, chee na ọtụtụ narị mmadụ ma ọ bụ puku kwuru puku mmadụ ga-agụ gị, kedụ otu ị si eche igosipụta onwe gị onye agụghị akwụkwọ, nwoke?
Daalụ, site na azịza gị, m na-ehicha ịnyịnya ibu m. Na nke abuo, etolitere m na-asụ Italiantali, ya mere, a na-asọpụrụ m ka m na-ede Spanish. Ehee, ụra nwa.
Nsogbu gi bu na ina ejighi debian (ubuntu, kubuntu, mint, wdg. Ha nile bu debian based not debian). Ngwa niile, arụmọrụ, nkwụnye na ngwa niile ikwuru, ana m eji Phenom II 955 X4 BE + ASUS ATI HD 5670 1 G DDR5 na ihe niile na - arụ ọrụ dịka silk. Gbalịa debian 7.6 site na akwụkwọ nkwado na ị nwere ike iju gị anya.
Ekwetaghị na Ati na-arụ ọrụ nke ọma na Windows, enwere m AMD Athlon 64 3500 + na ebule 2GB, yana X300 pci kwupụtara na windo 7, tv ezinụlọ na-aga jerk m, usoro a na - adịkarị nwayọ , na GNU / Linux Anaghị m agwa gị ihe ọ bụla, AMD bụ ihe mkpofu dị ọcha, yana intel core 2 duo nke macbook ihe ndị a emeghị
Ihichapụ ahịhịa na Shred
Calligra 2.7 dị na mgbanwe interface